Archive du 20170821
Rajaonarimampianina Hanao fitaovana ny FJKM indray
Fanompoam-pivavahana lehibe tao amin’ny kianja Monisipaly ao Antsiranana omaly alahady 20 aogositra no nanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny fankalazana ny jaobily faha-50 taonan’ny fiangonana FJKM eto Madagasikara sy ny faha-200 taona nidiran’ny Misiona LMS.
Fivorian’ny SADC tany Afrika Atsimo Nampanantena fifidianana mangarahara ny praiminisitra
Tontosa tany Pretoria Afrika Atsimo, tao amin’ny tao amin’ny trano lehibe fanaovana fivoriana goavana O.R Tambo
Voahangy Rajaonarimampianina Manana olana manokana amin’ny FJKM ?
Samy nahatsikaritra ny rehetra fa nandeha irery tsy nombam-bady indray ny filoham-pirenena tany Antsiranana nanomboka ny sabotsy lasa teo, satria tsy niaraka taminy Rtoa Voahangy Rajaonarimampianina vadiny.
James Ratsima “Tsy nety ny fihetsiky ny filoham-pirenena tamin-dRavalomanana”
Mitohy hatrany ny fanehoan-kevitra ataon’ireo mpanao politika eto amin’ny tany sy ny firenena manoloana ilay tranga
Karana iray mpanefoefo ao Toamasina Tsy matahotra ny lalàna misy eto Madagasikara
Teratany Karana iray malaza ho mpanefohefo sy mpanjakazaka fananan'olona ao amin'ny Faritr'Atsinanana no milaza, fa tsy matahotra ny lalàna misy eto amintsika.
Barean’i Madagasikara Rava teo ny nofinofy samihafa
Rava teo ny nofinofy samihafan’ny Barean’i Madagasikara dia ny mba handeha hiatrika ny dingana famaranan’ny CHAN 2018 any Kenya
Baolina kitra – Analamanga D-2 Voahosotra ho tompondaka ny CNaPS Analamanga
Tontosa omaly alahady 20 aogositra ihany noho ny farany ny lalao fiadiana ny ho tompondakan’Analamanga eo amin’ny taranja baolina kitra sokajy D-2.
Rugby - Kianja Makis Miezaka mihoitra ireo fileovana madinidinika
Mitohy hatrany ireo lalao tafiditra amin’ny fiadiana ny ho tomonpondakan’Analamanga Diviziona Elite tontosain’ny “Comité Technique Fédérale”
Manetsetra fotsiny e
Manetsetra sy mitsiriritra lava ny hafa lalandava ny Malagasy eo amin’ny fandrosoan’ny firenena. Ny olona lasa ihany, fa isika kosa mihemo-dava mamonjy ny rambony eo amin’ny resaka fahantrana.
Zanabohitra Andilamenakely Filamatra amin’ny fampandrosoana
Olona nifindra monina avy ao Betatao distrika Anjozorobe no namorina tanàna any Andilamenakely ny taona 1930.
Ndao hilalao andiany faha-4 Omena tombony koa ny ankizy any amin’ny faritra
Nifarana ny sabotsy teo rehefa naharitra iray volana mahery ilay hetsika “Ndao hilalao” nokarakarain’ny fikambanana Lato tetsy amin’ny ANS Ampefiloha.
Asan-dahalo goavana tany Andilamena Omby 700 no very
Mirongatra ny halatra omby any amin’ny faritra Alaotra. Omby miisa 700 be izao no lasan’ny dahalo ny 14 aogositra sy ny 16 aogositra laza teo.
Asan-dahalo any Betroka Misy fa tsy mafy be intsony
Omby 17 avy ao Andriatomefy, kaominin’i Ranohira, no nangalarin’ny dahalo ary nentiny nitsofoka nihazo an’i Betroka ny zoma teo,